Techsmith Snagit v11.2.1.72 + patch - .::just for share::.
Home » screen recorder » Techsmith Snagit v11.2.1.72 + patch
Techsmith Snagit v11.2.1.72 + patch
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ ၀ယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် 44 ဒေါ်လာလောက် တန်တဲ့ Top Ten စာရင်းဝင် Screen Chapter ဆော့ဝဲလ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ Full Version အသုံးပြုနိုင်အောင် patch ဖိုင်လေးပါ ထည်.သွင်းပေးထားပါတယ် ဒီကောင်လေးကတော့ရထား တာကြာပါပြီ အချိန်ပေးပြီးစမ်းသပ်သုံးစွဲနေလို. အခုမှတင်ပေးဖြစ်တာပါ ရုပ်ပိုင်း အသံပိုင်းအထူးပြောစရာ မလိုအောင် ကောင်းမွန်လှပြီး စိတ်ကြိုက် edit လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာကြောင့် လင့်မသေခင် အမြန်လေးဒေါင်းထားစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော့ရဲ. အင်တာနက်လိုင်းအနေအထားနဲ. နောက်တစ်ခေါက် ပြန်တင်ပေးဖို.ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲနေတာမို. မြန်မြန်သာဒေါင်းထားကြပါ........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ
Labels: screen recorder